wax ka ogow Qorshaha ciidanka Xooga dalka Somaliya loo geeyay Gobolka Gedo. – Kismaayo24 News Agency
by admin 10th February 2020 0213
saraakiil iyo Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegeya in dowladda Soomaaliya ay damacsan tahay in ay doorasho ku qabato magaalada Bu’aale oo ah xarunta Jubaland.
Sida ay ilo wareedyo noo sheegeen, dowladda ayaa damacsan in ciidan ay geyso xuduudaha Soomaaliya iyo Kenya ee Jubooyinka, kadibna ay ciidanka Itoobiya qabtaan gobalka Jubada Dhexe si doorasho deg deg ah loo qabto.
Ciidanka lagu daabulay Gedo, ayaa la sheegay in aysan ka qeyb qaadan doonin howlgalka balse ay ilaalin doonaan xuduudaha dalka, si loo ilaaliyo faro-gelinta Kenya kadibna loo qabto doorashada Jubaland.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegay in dowladda Itoobiya kula heshiiyay qorshahaan, islamarkaana ay suurta gal tahay in ay ka qayb qaataan ciidamo u dhashay dalka Eritrea oo soo gala Soomaaliya.
Sidoo kale wararka ayaa sheegaya in ka hor bisha April ay dowladdu qaban doonto Jubada Dhexe kadibna la qaban doono doorasho, waxaana halkaas lagu soo afjari doonaa waayaha Axmed Madoobe, sida ay noo sheegeen Ilo-wareedyo muhiim ah oo dowladda ka tirsan.
Ciidamada Itoobiya ayaa la filayaa in ay ka baxaan saddex gobal midkood, kuwaas oo kala ah Jubada Hoose, gaar ahaan Kismaayo, Gedo degmooyin ka tirsan iyo gobalka Bay, gaar ahaan Diinsoor oo masaafo aan fogeyn u jirta Bu’aale.
Haddii ay dowladda Soomaaliya qabato doorasho kale oo Jubaland ah islamarkaana aqoonsi iyo taageero u hesho waxay u muuqataa in halkaasi looga soo gudbay waayihii maamul gobaleedyada dalka inkastoo gebo-gebo uu waqtiga madaxda dowladda Soomaaliya uga harsan muddo xileedkeeda.
Maamulka laga dhisayo Jubaland ayaa qorshihiisu yahay inuu soo xilo xildhibaanada federaalka ee 2020, taasi oo dowladda siineys awoodda suu xulista xildhibaanada ka imanaya afar maamul goboleed, kuwaasi oo saddexda kale ay yihiin Galmudug, HirShabelle iyo Koonfur Galbeed. Arrintan ayaa qeyb ka ah qorshaha dib u doorashada Farmaajo, ama haddii aan si kale u dhahno isku dayga Farmaajo ee sii haysashada kursiga.
Xildhibaan goor dhow ku geeriyooday Magaalada Muqdisho iyo Madax sare oo.
Xildhibaanada Maamulka Galmudug oo qorshe culus damacsan..
Daawo: Qasaaraha ka dhashay madaafiic goordhaw lagu garaacay dagmada h/wadaag mid kamid ah wuxuuna ku dhacay……
Tifaftiraha K24 18th April 2017
XOG : Masuliyiinta Sare ee Wadanka oo Galkacyo ku wajahan si….
admin 26th November 2015
Xasaasi: Maxaadan Ogeyn oo ka soo baxay Kulan Albaabada u xiranyihiin oo Raisul wasaare sharmaarke iyo Axmad Madoobe ku dhexmaray Madaxtooyada Kismaayo????
Tifaftiraha K24 1st December 2016